UNINZI LWEECOMPUTER EZIBIZA KAKHULU - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Uninzi lweeComputer ezibiza kakhulu
Uninzi lweeComputer ezibiza kakhulu
Apha sabelana ngee-countertops ezibiza kakhulu kubandakanywa ezinye zeenzuzo kunye neengxaki kunye nento onokuyilindela ukuyihlawula.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokukhetha izinto xa kufikwa kwiitafile. Ngaphakathi kukho inani okanye iipateni, uyilo, kunye nemibala onokukhetha kuyo. Eyona ndawo onokuqala kuyo kwinqanaba lebhajethi, ufuna ukuchitha malini, okanye ungachitha malini?
Nje ukuba ukhethe ukuba ikuse kuluvo olululo lwezinto onokuzisebenzisa. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba awudingi nje isiqwenga setafile, kodwa kunye neendleko zokufaka eziza nayo. Ngokwesiqhelo, kodwa hayi rhoqo, ixabiso lofakelo liza kunyuka ngexabiso lezinto eziphathekayo. Rhoqo ubunzima bezinto kunye nexesha eliza kuthatha lizo ezinegalelo elikhulu kwixabiso lofakelo.
Ngokwesiqhelo izixhobo zokugqibela eziphezulu ayisiyonto ufuna ukuyivavanya kuqala zenzele ngokwakho iprojekthi endlwini yakho entsha, kuba e ukuba awufuni kuyibhatala kube kanye, ndiqinisekile awufuni kuyibhatalela kabini nje ukuba yenziwe ngokuchanekileyo. Iithayile zihlala zithatha ixesha elininzi, ngelixa ii-slabs zihlala zinzima.
Ngelixa kukho itoni yokhetho lwexabiso eliphantsi xa kufikwa kumba wee-countertops, kukwakhona ukhetho olukhulu kwisiphelo esiphakamileyo semarike yokuthengisa. Ithegi ephezulu yexabiso iza nezinto ezininzi ezilungileyo nezingalunganga. Rhoqo izinto zokuxabisa eziphezulu zizinto ezisemgangathweni ophezulu. Oku kunokuba nokuqina, amandla acocekileyo, okanye nobomi bemveliso.
Ixabiso eliqhelekileyo lomtshato
Uninzi lwexesha kunye nale ufumana oko uhlawulayo. Ezinye izinto azinawo amanqanaba azinzileyo, kodwa uhlawula inkangeleko. Kwiindawo ezingasetyenziswanga rhoqo, kodwa ngakumbi ukuboniswa, ezi zinokubaluleka, zilungele ukuyihlawula. Kukho iindlela zokufumana okona kulungileyo kwihlabathi liphela nangona, uninzi lwezi ndlela zokugqibela ziphezulu zinokukhetha ukuba zenziwe iithayile endaweni yee-slabs nje, oku kunokuhlala kuzisa ixabiso lentengo, ngelixa ufumana isitayile okanye umgangatho Uyafuna.
Ezinye zezona zikhetho zidumileyo, eziphezulu eziphezulu zidwelisiwe kwaye zichazwe ngezantsi.
Imiphezulu yeetafile Granite
Imiphezulu yamatye eMarble
Imiphezulu yeetafile eLaminate
Imiphezulu yeetafile Stainless
Imiphezulu yeetafile yekhonkrithi
Iitafile zeglasi ezihlaziyiweyo
Imiphezulu yeetafile yekhitshi ngexabiso eliphantsi kwezona zibiza kakhulu
Imiphezulu yeetafile zeQuartz zinokulungiswa kwaye uninzi lwazo luyi-quartz yendalo, kunye nezinye izinto ezimbalwa ezixutywe kukhetho olufanelekileyo lombala kunye noyilo. Oko bekutshiwo, imiphezulu yeetafile ze-quartz zinokuza ngemibala eyahlukeneyo kunye neepateni, kwaye zingenziwa ngokwesiko ngendlela ofuna ngayo okanye oyifunayo kwi-countertop.
Ukwenza ngokwezifiso kunye namanqanaba obunzima kunokubangela ukuba uluhlu lwamaxabiso lwahluka kwicala eliphezulu lesikali. Ngethamsanqa, emva kwentlawulo yokuqala yokuqala, akukho zindleko zininzi zolondolozo ziyafuneka kwiitafile ze-quartz, zigcine zicocekile kwaye ziya kuhlala zikho. Ukuqina kokuqina kweetafile ze-quartz kuyamangalisa - kuya kuhlala kuhlala ubomi babo bonke. Ukugcina iindleko phantsi kukho ufakelo lethayile olukhoyo endaweni yeslabs.
Imiphezulu yeetafile zekartz ungabaleka naphi na ukusuka kwi- $ 55 ngonyawo wesikwere ukuya kwi- $ 155 ngonyawo wesikwere, kungabandakanyi ukufakwa.
Imiphezulu yeetafile zeGranite lukhetho olukhulu, kwaye ngelixa bekwicala elibizayo, kumaxesha akutshanje amaxabiso ehle, isenza ixabiso lokugqibela ukuba lihle ngakumbi.
I-Granite ifuna ukugcinwa, kubandakanya ukutywinwa rhoqo. Oku kufuna ezinye iidola ngalo lonke ixesha ukutywinwa kufuneka kwenziwe. Ngaphandle kokutywinwa kwegranite kunokucocwa. Logama nje oko kukhathalelwe umphezulu womelele kakhulu kwaye unqabile kubushushu.
Imiphezulu yeetafile zeGranite zinemibala eyahlukeneyo kunye neepateni onokukhetha kuzo, zibenza babe bhetyebhetye kakhulu. Ukuba uzama ukugcina iindleko ziphantsi, zama ukukhetha iithayile zegranite endaweni yamatye amakhulu. Oku kwenza ukuba zombini izinto kunye nokufakelwa kwehle iindleko. Ngenxa yobunzima begranite, kungcono ukujonga kufakelo lobungcali.
Imiphezulu yeetafile Granite ungabaleka naphi na ukusuka kwiidola ezingama-45 ngonyawo wesikwere ukuya kwii-200 zenyawo ngonyawo wesikwere, ngaphandle kokufaka.
Imiphezulu yeetafile zemarble lelona litye libiza kakhulu kwiitafile zokubala, kodwa ukubonakala okungagungqiyo kubonakalisa ityala elinzima. Ukusebenzisa i-marble kuthatha ikhitshi kwi-drab ukuya kwi-fab ngomzuzwana. Ezi zihlala zisetyenziswa kwiindawo ezingasetyenziswanga rhoqo.
I-Marble iyakwazi ukucoca, ibala kwaye idinga ukugcinwa okuninzi. Eli lixabiso umntu analo kubuhle obuza nemabhile. Ukuba usafuna ukusebenzisa le mveliso, kodwa ufuna ixabiso elisezantsi kwithegi- zama ukusebenzisa ibakala elingaphantsi lemabhile okanye udibanise iithayile endaweni yamatye amakhulu emarmore.
Imiphezulu yeetafile zemarble ungabaleka naphi na ukusuka kwi-75 yeedola kwisikwere seenyawo ukuya kwi-250 yeedola zenyawo, kungabandakanyi ukufakwa.
Imiphezulu yeetafile yeenkuni inokuzisa into yendalo kuyilo olubukeka luhle. Nangona kunjalo, ukhuni lunokufuna isixa esihle solondolozo ukugcina ubuhle balo. Imiphezulu yeetafile yeenkuni zifuna ukuthambisa ioyile amaxesha ngamaxesha kuyo yonke iminyaka emi-2 ukuya kwemi-3. Kuyimfuneko ukucoca ukuchitheka nokusula amanzi agqithisileyo kwangoko ukuthintela iinkozo zomthi ekufunxeni amabala.
Zininzi iindidi zemiphezulu yeetafile zokukhetha iinkuni. Ezinye zezona zidumileyo yi-oki, imephu kunye nomnatha kunye neentlobo ezingaqhelekanga ze-teak, i-cherry kunye ne-tigerwood.
Ixabiso le imiphezulu yeetafile iinkuni ingatshintsha ngokuxhomekeka kuhlobo lomthi. Iibhloko zokubala iinkuni zihlala zixabisa ukusuka kwi-35 ukuya kwi-85 yeedola kwisikwere
Imiphezulu yeetafile elaminethiweyo yeyona ndlela inexabiso eliphantsi kwaye ihlala ixesha elide, isondlo esisezantsi kwaye kulula ukuyifaka kunezinye iindidi zetafile.
Ngezi zinto zilungileyo ziyafika ezinye izinto ezinje ngobomi bexesha elimalunga neminyaka eli-10 ngaphambi kokufuna ukutshintshwa. Banokuchaphazeleka kukutshiswa ziipani ezishushu kunye nokukrwela kosetyenziso lwemihla ngemihla. Ukongeza i-laminate ngelixa yenziwa ukuba ibonakale njengelitye lokwenyani lineepatheni ezifanayo kakhulu kunye nombala wombala.
Iitafile zekhitshi ezinamanzi zibiza ukusuka kwi- $ 10 ukuya kwi- $ 40 ngesikwere ft, ngaphandle kofakelo.
Imiphezulu yeetafile yesepha yamatye ithambekele ekubeni mnyama kwaye ityebile ngombala kwaye inolusu olugudileyo. Ngenxa yombala omnyama, amabala awanangxaki kakhulu, kunye neempawu ezinganyangekiyo. Oku kwenza indlela elula yokugcinwa, ngaphandle kwesidingo sokucocwa ngeoyile yezimbiwa rhoqo. Ngelishwa ezi zichaphazeleka kukukrwela kunye nomonakalo. Ezi ziqwenga ezibuthathaka kufuneka zifakelwe ngokufanelekileyo.
Imiphezulu yeetafile yesepha ungabaleka naphi na ukusuka kwi-70 yeedola kwisikwere seenyawo ukuya kwi-120 yeedola kwisikwere, kungabandakanyi ukufakwa.
Imiphezulu yeetafile zentsimbi engenazintsimbi zikwisiphelo esisezantsi esiphakemeyo semiphezulu yeetafile ezibizayo. Insimbi engenasici isetyenziswa kakuhle kuseto lwentengiso, kodwa ikwasetyenziswa kwiikhitshi zokuhlala. Olu hlobo lwekhawuntari luyamelana nobushushu kwaye kulula kakhulu ukulicoca. Ngelishwa i-stainless steel iyakrwempa ngokulula, kwaye inokutsala iminwe.
Imiphezulu yeetafile Stainless ungabaleka naphi na ukusuka kwi- $ 80 ngonyawo wesikwere ukuya kwi- $ 100 ngonyawo wesikwere, kungabandakanyi ukufakwa.
Imiphezulu yeetafile ekhonkrithi ixhomekeke kuyilo lwangoku. Uyilo luqhelekile ngokulula kwaye ngokuthe ngqo. Oku kubenza babe bhetyebhetye kakhulu, ngakumbi kuba banokuba nemibala ngokulula kwinto onokuyifuna ngedayi okanye amabala ahlukeneyo.
Ikhonkrithi ilula ukusika okanye ukumila, ngenxa yoko izinto zesiko azilidubuli ixabiso kakhulu. Ngelishwa imiphezulu yeetafile yekhonkrithi iya kuba nzima kakhulu, ithumele amaxabiso okufakela phezulu, kwaye oko kuthetha ukuba kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba i-countertop inezixhasi ezichanekileyo ngaphantsi kokubamba ubunzima.
Ngelixa imiphezulu yeetafile zekhonkrithi zinokusebenza ngamandla ungonga kakhulu ngokwenza ukugalela kunye nokuzifaka ngokwakho. Kwiprojekthi ye-DIY yokubala iikhonkrithi lukhetho olunokufikeleleka kakhulu.
Imiphezulu yeetafile yekhonkrithi ungabaleka naphi na ukusuka kwi- $ 100 ngonyawo wesikwere ukuya ku- $ 150 ngonyawo wesikwere, kungabandakanyi ukufakwa.
Imiphezulu yeetafile ezenziwe ngeglasi erisayikilishekiyo zezona zinokukhetha okusingqongileyo xa kufikwa kwizinto zokubala ikhitshi. Ngelishwa, ngelixa unolwazi ngokusingqongileyo kuya kufuneka uyihlawule. Njengoko ii-countertops zeglasi eziphinda zenziwe kwakhona zihlobo olubiza kakhulu kwizinto eziphathekayo zekhitshi.
Olu hlobo lwee-countertops lusebenzisa iklasi ehlaziyiweyo exutywe nesamente ukwenza umphezulu owomeleleyo. Ngecandelo lekhonkrithi kunye nokuba sisiseko se-countertop, kuya kuthatha uninzi lweempawu ezifanayo ezikwiphepha lokubala lekhonkrithi (nceda ubone apha ngentla ngeenkcukacha). Umahluko omkhulu ukubonakala, ngokucacileyo ngamabhanti eglasi erisayikilishwe aphoswe kuyo; imbonakalo iya kwahluka kancinci, ngokwenkangeleko eyahlukileyo.
Oku kuhlala kunokwenziwa ngokwezifiso ngombala weglasi kunye nobungakanani beziqwenga. Ngamanye amaxesha umsebenzi wesiko uya kubiza kakhulu, kwaye le mveliso inokuba nzima ngakumbi ukuyifumana njengoko ingaqhelekanga njengezinye zezi ntlobo zeetheyibhile zikhankanywe apha ngasentla.
Umgangatho ophezulu wokuphinda usebenzise iglasi yenye yezona ndawo zibiza kakhulu kwaye ungabaleka naphi na ukusuka kwi- $ 100 ngonyawo wesikwere ukuya kwii- $ 160 ngeenyawo zenyawo, kungabandakanyi ukufakwa. Jonga igalari yethu ye imiphezulu yeetafile ekhitshini yeglasi Apha.
Imiphezulu yeetafile zekhitshi ngexabiso eliphantsi kwezona zibiza kakhulu
Nalu ulwazelelo lwethu olukhawulezileyo lwetheyitile efikelelekayo ngeyona incinci (ngaphandle kofakelo lubandakanyiwe.)
lithini ixabiso eliphakathi lengubo yomtshato
Iitafile zelaminathi zibiza ukusuka kwi- $ 10 ukuya kwi-40 kwi-square nganye.
Iitafile zeenkuni zibiza ukusuka kwi-35 ukuya kwi-85 yeedola kwisikwere ft.
Imiphezulu yeetafile zeGranite zibiza ukusuka kwi- $ 45 ukuya kwi-200 yeenyawo ngonyawo wesikwere.
Imiphezulu yeetafile zeQuartz zibiza ukusuka kwi- $ 55 ukuya kwi-155 yeenyawo zenyawo nganye.
Iitoptops ze-Soapstone zibiza ukusuka kwi-70 ukuya kwi-120 yeedola ngeenyawo.
Iitafile zeMarble zibiza ukusuka kwi-75 ukuya kwi-250 yeenyawo zenyawo zenyawo.
Iitafile zensimbi ezingenazintsimbi zibiza ukusuka kwi- $ 80 ukuya kwi-100 yeenyawo ngonyawo wesikwere.
Iitafile zekhonkrithi zibiza i-100 yeedola ukuya kwi-150 yeenyawo zenyawo nganye. (I-DIY inokubiza kakhulu)
Iiplathi zokuphinda zenziwe kwakhona zeglasi zibiza ukusuka kwi- $ 100 ukuya kwi-160 yeenyawo zenyawo nganye
Ukuba wenza uyilo lwakho lwangaphakathi ungazama ngeendlela ezahlukeneyo zokubala usebenzisa enye yeefayile Isoftware yoyilo ekhitshini iinkqubo. Ezinye zeenkqubo zibonelela ngokusondela kunye neembono ezintathu ezinokukunceda ubone ngendlela eyahlukileyo izinto ezigqityiweyo kunye nezixhobo kwindawo yakho.
amatye okubandakanya amakhonkco ngaphandle kweedayimane
yeyiphi iminwe yakho yomsesane
Uluhlu lweefoto zomtshato
ilokhwe ebomvu yomtshato obomvu
iisuti zokuthambisa ezifanayo kwizibini ezitshatileyo